सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने सर्पले कसरि गर्छ सेक्स, एक मिनेटको लागि तपाइँपनि अचम्मित हुनुहुन्छ पढ्नुहोस ??::Nepal's Online News Portal
सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने सर्पले कसरि गर्छ सेक्स, एक मिनेटको लागि तपाइँपनि अचम्मित हुनुहुन्छ पढ्नुहोस ??
पौष २१, सांसारको सबैभन्दा जटिल कुरा भनेको सेक्स नै हो । प्रकृतिले यसलाई यति जटिल बनाएको छ जसबारे जति अनुसन्धान गर्यो त्यती नै नयाँपन देखिन्छ भने त्यति नै अचम्मित गरिदिने तथ्य सार्वजनिक हुन्छन् । हरेक जीवसँग सेक्सको तरिका, दृष्टिकोण, मिथ परिवर्तन हुने गर्दछ । चाहे त्यो मानिससँग सम्बन्धित होस् वा सर्पसँग ।
पोथी सर्पसँग थुप्रै भालेले सेक्स गर्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा अन्तिममा यस्तो गर्ने फाइदामा रहन्छ । त्यसको शुक्राणु सबैभन्दा माथि हुन्छ र सबैभन्दा पहिले अण्डाशयसम्म पुग्ने गर्दछ । तर, सेक्सपछि आफूलाई कसरी बचाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । किनभने पोथी एनाकोन्डाले सेक्सपछि भालेलाई खाने गर्दछ । त्यसकारण पोथी धेरैजसो सेक्सपछि भाग्ने कोसिसमा रहेको हुन्छ । बीबीसी